İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye Rekor Ceza | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[06 / 11 / 2019] Flash Development! Istanbul Marmaray ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာမှထုတ်ပယ်ခံရသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 11 / 2019] BOT စီမံကိန်းများအတွက်အများပြည်သူခရီးသွားအာမခံအတွက် 65 ဒေါ်လာဒေါ်လာသန်းအရှုံး	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 11 / 2019] Ankara ရှိ Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှုပ်ရှားမှု! 'Bursa ထိုက်တန်'	16 Bursa
[06 / 11 / 2019] သံပိုးလမ်းကိုမင်္ဂလာပါ	06 တူရကီ
[06 / 11 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ဆက်လက်တိုးတက်နေ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 11 / 2019] တရားဝင်ပြန်တမ်းတွင်ထုတ်ဝေသည် TCDD ရက်ချိန်းဆုံးဖြတ်ချက်များ	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliIzmit ပင်လယ်ကွေ့ကိုညစ်ညမ်းစေသောသင်္ဘောအတွက်ပြစ်ဒဏ်စံချိန်တင်
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
izmit korfez အားညစ်ညမ်းစေသောသင်္ဘောသို့အပြစ်ပေးအရေးယူ
Kocaeli Metropolitan Municipality မှ Izmit Bay အားကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏အစီရင်ခံစာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းက Izmit Cook Islandd ပင်လယ်အော်ရှိကုန်တင်ကုန်ခြောက်သဘောင်္ကြီးသည်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး ဦး စီးဌာန, စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်ညစ်ညမ်းမှုမှ passage မပေးပါဘူး။7နေ့ 24 အသင်းများသည်နေ့နှင့်ညအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးအသိပေးစာတိုင်းကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် Izmit ပင်လယ်ကွေ့ရှိပင်လယ်ကွေ့ခရိုင်ရှိဆိပ်ကမ်းသည်ညစ်ညမ်းသောခြောက်သွေ့သောကုန်တင်သင်္ဘောသတိပေးအဖွဲ့များကိုစုစည်းခဲ့သည်။
Metropolitan မြူနီစီပယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး ဦး စီးဌာနအဖွဲ့များသည်အသိပေးစာထုတ်ပြန်သည့်ဆိပ်ကမ်းသို့သွားခဲ့သည်။ အဖွဲ့များ၊ ဆိပ်ကမ်းသည် Izmit ပင်လယ်ကွေ့ရှိသွေ့ခြောက်သောကုန်တင်သင်္ဘောများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တွေ့ရှိရသောညစ်ပတ်သောလှေခါးထစ်များဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောနမူနာများကိုအဖွဲ့များကသိမ်းယူခဲ့ပြီး 16 ထောင်ပေါင်းများစွာသော 761 Groston ခြောက်သွေ့သောကုန်တင်သင်္ဘောကို Queen Anatolia Cook Cookland Banda 1 Million 772 ထောင်ပေါင်းများစွာဒဏ်ငွေဖြတ်ခဲ့သည်။
AIR ထိန်းချုပ် Marine လေယာဉ်
Izmit ပင်လယ်အော်အားသန့်ရှင်းစွာထားနိုင်ရန် Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်ပင်လယ်ထိန်းချုပ်လေယာဉ်များမှသင်္ဘောများနှင့်သင်္ဘောများမှပင်လယ်ရေညစ်ညမ်းမှုကိုစစ်ဆေးသည်။ 2007 နောက်ပိုင်းအလုပ်များအတွင်းပင်လယ်ထိန်းချုပ်ရေးလေယာဉ်သည် Izmit ပင်လယ်ကွေ့ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်သင်္ဘောများ၏အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Union Marmara မြူနီစီပယ်များနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်စာချုပ်အရ Marmara ဒေသရှိပြည်နယ်အားလုံးအားဆောင်ရွက်ပေးသည့် Sea Plane သည် Cengiz Topel လေဆိပ်မှဆင်းသက်နိုင်ပြီးဆင်းသက်နိုင်သည်။
ညစ်ပတ် Ballast ဆိုတာဘာလဲ
သင်္ဘောကနေဖြန့်ချိသောအခါ, ရေ၊ ရေနံထွက်ရှိမှုသို့မဟုတ်ရေနံနှင့်ရေနံနှင့်ကပ်လျက်ရှိရေနံပေါ်ရှိသဲလွန်စများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ရေသို့မဟုတ်ရေအောက်ရှိဆိုင်းငံ့ထားသောအစိုင်အခဲများသို့မဟုတ် emulsions များကိုအရောင်ပြောင်းစေသည့်လှေငြိမ်ရေ။
Izmit Bay ညစ်ညမ်းမှု 10 သင်္ဘော 10 သန်းထောင်ပေါင်းများစွာဒဏ်ကြေး! 15 / 10 / 2019 Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ဌာနပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိညစ်ညမ်းမှုကိုမလွန်။7ရက် 24 နာရီများသည်အသင်းများဟုပြောစရာမလိုပဲ၊ 2019 အဖြစ်အပျက်တွင် 10 အဖြစ်အပျက်အတွက်နာရီအလုပ်လုပ်သည်။
Izmit Bay ညစ်ညမ်းမှု 10 သင်္ဘော 10 သန်းထောင်ပေါင်းများစွာဒဏ်ကြေး!
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (104) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (510) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)